Cookies Mgwakota agwa Pretzel - Ezi Ntụziaka
ugu eji megharịa ọnụ na graham esi jikọrọ ọnụ
ihe iri na atịchok
ihe esi esi nri na hash browns
obe ọgịrịga anụ uzommeputa crock ite
banana banana na-atọ ụtọ condensed mmiri ara ehi
© Copyright ©2021 All rights reserved pmc2019.pt | AmụMa Nzuzo
Cookies Mgwakota agwa Pretzel
Cookies Dough Pretzel Bites bụ ihe kachasị mma na-eme achịcha! Ejiri kpochapụwo, kuki na-enweghị àkwá nke sandwiched dị n'agbata pretzels abụọ nnu wee gbanye na chocolate gbara ọchịchịrị, ha agaghị adịte aka!
A na m ewere onwe m dị ka onye nwere ihu ọma ibi n'oge a na-anabatakarị kuki kuki.
Ibunye ihendori maka osisi zucchini eghe
Maka na, otu oge na mgbe na-adịghị anya gara aga, ị na-ata achịcha kuki eji esi nri. A na-erikarị ya na nzuzo na ndò nke ebe a na-eri nri, jiri nwayọ zaa site na ịgwakọta ngaji, ma kesaa ya na efere nke mgwakota agwa na friji (ma ọ bụ ma eleghị anya ọ bụ naanị n'ụlọ m). Ọbụna egwu na-atụ ụjọ nke iri nsen ezighi ezu iji debe ọtụtụ kuki mgwakota agwa fanatics ( dika m ) site na ichi aru ma obu abuo (… ma obu iri).
Megharịa uzommeputa a iji chekwaa ya
Ma na nso nso a na e nwere kuki mgwakota agwa nnwere onwe! Anyị emeela ka achịcha kuki dị elu ruo n'ụdị ọrụ na-enweghị akwa, ma ugbu a enwere ike iri ya na ndò na-enweghị ihere. Ihe bụbu ihe bu ụzọ tupu megharịa ọnụ abụrụla ihe kachasị mma, taa m na-atụgharị ya na ọkwa ọzọ site na kuki na-atọ ụtọ na nnu nnu mgwakota agwa!
Achịcha kuki a bụ enweghị akwa na-enweghị akwa ole na ole nke nnukwu ude na-eguzo maka àkwá ma nye ya ndochi a ude mmiri na-enweghị ịchụ àjà ahụ kuki mgwakota agwa dị ụtọ anyị niile maara ma hụ n'anya nke ukwuu. Mgbe ahụ, a na-agbanye ya n’etiti pretzels abụọ (n’ihi na onye na-ahụghị nnu ahụ ụtọ / ngwakọta ụtọ) na mgbe ahụ tinye n'ime gbara ọchịchịrị chocolate maka ezigbo ihe. Ego ego ma ọ bụrụ na ị na-eji akwa mmiri ma ọ bụ nke na-adịghị edozi ha edozi ha.
akwa noodle ude nke ero ofe
Sweettọ na nnu, nke ejiri pọtụ chọkọletị chikọlị ma yikwasị uwe ojii chọkọletị gbara ọchịchịrị, kuki ndị a na-eji kuki pretzel ata bụ kacha (ma eleghị anya, ọ kachasị mfe!) Obere nri.
5site na1votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebeiri abụọ Nkeji Oge zuru ezuiri abụọ Nkeji Ọrụ24 pretzel na-ata aru Onye edemedeSamantha Merritt @ SugarSpunRun Salts pretzels jupụtara na ntụ ọka kuki na-enweghị akwa ma tinye na chocolate na-eme nri a na-apụghị igbochi egbochi. Bipute Ntụtụ
▢1 osisi unsired butter dị nro
▢3/4 iko shuga na-acha aja aja tightly juru n'ọnụ
▢1 tsp wepụ vanilla
▢1/8 tsp nnu
▢3/4 iko ntụ ọka niile + Ngaji abụọ
▢2 1/2 tablespoons ude dị arọ
▢1/2 iko ibe chọkọleti
▢Odika 50 obere pretzels
▢1 1/2 iko ọchịchịrị chocolate na-agbaze wafers
▢abụọ Tbsp akwụkwọ ndị ọzọ , maka fesa (nhọrọ)
ihe ị ga-eji wee ofe tortilla were jee ozi
Na igwekota nguzo (ma obu iji ihe igwekota aka), hichaa butter gi na sugar brown rue mgbe oku di oku.
Nwuo na wepụ vanilla.
Wụsa na nnu ma bido nke ọma.
Na igwekota na ọkara-obere ọsọ, jiri nwayọ tinye ntụ ọka gị niile ruo mgbe agwakọtara ihe niile. Jide n'aka na ị na-akwụsị igwekota gị site n'oge ruo n'oge iji kpochapụ akụkụ na ala nke nnukwu efere ahụ na spatula.
Jiri nke nta nke nta tinye ude dị arọ na ngwakọta ruo mgbe agwakọtara ya (ọzọ, kwụsịtụ ịchacha akụkụ na ala nke nnukwu efere).
Kpoo na obere chọkọ chọkọletị
Were otu ngaji achịcha kpochapu wee tụdo ya n’aka gị wee mepụta bọọlụ *. Were obere ọbụ aka gị, dokwasị ya n'elu otu pretzel. Sanwichi na pretzel ọzọ, ma dozie akwụkwọ kuki eji akwụkwọ mee.
Tinyegharịa ruo mgbe etinyere kuki niile ahụ.
Agbazekwa chocolate gị dịka ntuziaka dị na ngwugwu ahụ.
Ozugbo chocolate gbazee, were pretzel-sandwiches gị n’otu n’otu ma gbanye ha ọkara n’ime chocolate. Laghachi na mpempe akwụkwọ wax wee fesaa ya na nonpare ma ọ bụ fesa ozugbo, ọ bụrụ na eji ya.
Tinyegharịa ruo mgbe sandwiches niile abanyela ma fesa ya.
Kwe ka chocolate tinye tupu iri nri.
* Ọ bụrụ na mgwakota agwa dị oke nnyapade, hapụ ya ka o tinye ya na friji ruo minit 5 ruo mgbe o siri ike iji tụgharịa. Ekwela ka ọ zụọ oyi ruo ogologo oge, agbanyeghị, ma ọ bụ na ọ ga-esi ike karịa na ị nwere ike imebi ihe ị na-eme na-achọ ịkpụcha ha gburugburu kuki kuki.
Calorisị:70,Carbohydrates:13g,Abụba:1g,Cholesterol:abụọmg,Sodium:iri abụọmg,Potassium:13mg,Sugar:9g,Vitamin A:30IU,Calcium:12mg,Iron:Ugboromg
Isiokwukuki mgwakota agwa, pretzel ata aru N'ezieDezaati Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
* (Peoplefọdụ ndị na-atụ ụjọ iri ntụ ọka erughị ala n'ihi kwere omume njikọ E. coli. Anaghị m ekwe ka nke ahụ gbochie m, mana biko jiri ezi uche gị. Ọzọkwa, iri lbs 10 nke mgwakota agwa kuki nwere ike ịkpata obere ihere, mana anaghị m ekwe ka nke ahụ gbochie m, ma)
Ntụziaka ndị ọzọ ị ga-ahụ n'anya!
Brownies Kukii Brownies
Kuki mgwakota agwa itinye
ihe iji jee ozi na cutlets ọkụkọ
Cookies Mgwakota Buttercream candies
Ngwurugwu ohuru Mojitos
Mfe a Roara n'ọkụ nke Turnips
Nnukwu eji akwa akwa akwụkwọ!
Egwuru Egwu Dị Mfe Dị Mfe
Mfe Rotisserie Chicken Ntụziaka
Nri ngwa ngwa Turkey ofe (Cajun Bean)
Achịcha cheese cheese nke Strawberry (Ọ dịghị achicha)
Mfe Ramen ịkpali ighe